Ukwakhiwa kwebandla akusiyo into elula! Ngifaka yonke inhliziyo Yami ekulakheni futhi noSathane angenza konke okusemandleni akhe ukulibhidliza. Uma ufuna ukwakhiwa kumele ube nombono; kumele uphile impilo Ngami, ube ngufakazi kaKristu, uphakamisele uKristu phezulu futhi uthembeke Kimina. Akumele wenze izaba, kepha kunalokho ulalele ngaphandle kwemibandela, ubekezelele noma iziphi izilingo, futhi wamukele konke okuvela Kimina. Kumele ulandele konke uMoya oNgcwele okwenzayo ukukuhola. Kumele ube nomoya okhuthele futhi ube nolwazi lokwahlukanisa izinto. Kumele ubaqonde abantu futhi ungabalandeli nje okwempumputhe abanye, gcina amehlo akho omoya egqamile futhi ube nolwazi olunzulu ngezinto. Abantu abanomqondo ofanayo noWami kumele bangifakazele futhi balwe impi enkulu noSathane. Kumele kokubili nakhiwe futhi nilwe impi. Ngiphakathi kwenu, ngiyaneseka, futhi ngiyisiphephelo senu.
Okokuqala okumqoka kulo msebenzi ukuzicwenga, ube umuntu oguqukile, futhi ube nomoya ozinzile. Kumele uphile Ngami ezimweni ezimbi nezinhle, futhi noma ngabe usekhaya noma kuyiphi enye indawo, kumele unganqikazi ngenxa yomunye umuntu, noma ngenxa yesehlakalo noma into ethile. Futhi kumele ume uqine futhi, njengokujwayelekile, uphile impilo ngokukaKristu futhi ubonakalise uNkulunkulu uqobo Lwakhe. Kumele wenze umsebenzi wakho futhi ugcwalise imisebenzi yakho njengokujwayelekile; lokhu akwenzeki konke ngesikhathi esisodwa, kepha kumele kuqhutshwe njalo. Kumele uthathe inhliziyo Yami njengeyakho, izinhloso Zami kumele zibe imicabango yakho, kumele ucabange ngesimo sisonke, vumela uKristu avele kuwe, futhi usebenze ngokubambisana nabanye. Kumele ugcine ijubane lomsebenzi woMoya oNgcwele futhi uziphonse endleleni yensindiso yoMoya oNgcwele. Kumele uzivule futhi ube umuntu omsulwa futhi ovulelekile. Kumele uhlanganyele ngokujwayelekile nabafowenu nodadewenu, ukwazi ukwenza izinto emoyeni, ubathande, wenze abanamandla kukho kuvale ubuthakathaka bakho, langazelela ukwakhiwa ebandleni. Kulapho-ke uyoba nesabelo khona embusweni.
Ubungcwele BukaNkulunkulu (II)Sigcinane sixoxe ngesihloko esibaluleke kakhulu, yisihloko abantu abebevamile ukukhuluma ngaso, futhi yigama...